GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ka e were ya na unu na-aga ịkwaga ebe ọzọ n’ihi ọrụ papa gị.
Ezigbo enyi gị na-akwaga ebe dị anya.
Nwanne gị nwaanyị unu na ya bi n’ụlọ na-ala n’ụlọ di ya.
Olee ihe ị ga-eme n’ọnọdụ nke ọ bụla?
O nwekarịghị ihe oké ifufe na-eme osisi ọ bụla na-ekwe ka ifufe na-efegharị ya. N’otu aka ahụ, i nwere ike ịmụta otú ị ga-esi anabata ọnọdụ ọ bụla ị na-agaghị agbanweli. Tupu anyị ekwuwe ihe mmadụ ga-eme ma ihe gbanweere ya, ka anyị burugodị ụzọ tụlee ihe ụfọdụ anyị kwesịrị ịma gbasara ihe ịgbanwere mmadụ.
O nwere ike ịdabara onye ọ bụla. Baịbụl kwuru hoo haa na ‘oge ọdachi na ihe a na-atụghị anya ya na-abịakwasị mmadụ niile.’ (Ekliziastis 9:11) Ma, ihe agbanwereghị gị taa, o nwere ike ịgbanwere gị echi. Ma, ọ bụghị ihe niile mmadụ na-atụghị anya ya bụ ihe ọjọọ. O nwedịrị ihe na-eyi ihe ọjọọ ma ọ dabara mmadụ, ka oge na-aga ya abaara onye ahụ uru. Ọtụtụ ndị na-eme nke ọma n’ihe ha na-emekarị kwa ụbọchị, ihe gbanweere ha, ọ na-akpa ha aka ọjọọ.
Ọ na-akacha akpa ndị na-eto eto aka ọjọọ. N’ihi gịnị? Otu nwa okorobịa aha ya bụ Okezie * kwuru na ọ naghị adịrị onye na-eto eto ahụ́ ya ka na-agbanwe agbanwe mfe ma ihe gbanweere ya.
Ihe ọzọ bụ na onye na-eto eto enwebeghị ihe ọ hụrụ ná ndụ. Ihe gbanweere ya, ọ gaghị ama ihe ọ ga-eme eme. Ma, ọ bụrụ onye torola eto, o nwere ike icheta ihe o mere mgbe ụdị ihe ahụ meburu ya.
Ị ga-edili ya. Mmadụ ga-edili ihe ọ bụla gbanwere ná ndụ ya. Ihe ga-eme ka ihe gbanweere mmadụ mara ya ahụ́ abụghị naanị onye ahụ idi ihe ahụ. O kwesịkwara ịgbalị chọpụta otú o nwere ike isi jiri ohere ahụ mepụta ihe bara uru. Ọ ga-ara ahụ́ onye na-eto eto ahụ́ ya nabatara ihe gbanweere ya aṅụwa ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ oké mmanya.
Nabata ya. O doro anya na ị chọghị ka ihe ọ bụla gbanweere gị otú ị chọrọ ka ndụ gị dịrị. Ma, ndị enyi gị nwere ike ịkwaga ebe ọzọ ma ọ bụkwanụ lụọ di ma ọ bụ nwunye. Nwanne gị nwere ike ịga biri nke ya. Ihe ụfọdụ nwere ike ime ka unu kwaga ebe ọzọ, gị ahapụ ndị enyi gị na ebe marala gị ahụ́. Ọ ka mma na ị nabatara ya otú ahụ, karịa ikwe ka ọ na-echu gị ụra.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ekliziastis 7:10.
Lekwasị anya n’ihu. Onye na-eche naanị gbasara otú ihe dịbuuru ya yiri onye na-anya ụgbọala nke anya ya dị naanị n’enyo na-egosi ya ihe ndị dị n’azụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na onye na-anya ụgbọala kwesịrị ịna-eletụ anya n’enyo ahụ, ma, o kwesịrị ịka na-ele anya n’ihu. N’otu aka ahụ, onye ihe gbanweere kwesịrị ilekwasị anya n’otú ihe ga-emecha dị n’ọdịnihu. (Ilu 4:25) O nwere ike ịjụ onwe ya, sị: Olee ihe ndị m nwere ike imepụta n’ime otu ọnwa ma ọ bụ n’ime ọnwa isii na-abịa abịa?
Lekwasị anya n’ihe ọma dị na ya. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Ifeoma kwuru na ihe ga-eme ka mmadụ die ihe gbanweere ya bụ otú onye ahụ si were ihe ahụ. O kwukwara na mmadụ kwesịrị ịchọpụta otú ọ ga-esi jiri ọnọdụ ọhụrụ ahụ mepụta ihe bara uru. Ì nwere ike ikwu otu ihe ị ga-ejili ụdị oge ahụ emepụta?—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ekliziastis 6:9.
Nwa agbọghọ ọzọ aha ya bụ Ugomma kwuru ihe mere ya mgbe ndị enyi ya niile kwagara ebe ọzọ. O rubeghị afọ iri abụọ mgbe ahụ. Ọ sịrị: “Owu nọ na-ama m, ya adị m ka ya bụrụ na mụ na ha ka nọ. Ma, ọ bụ mgbe ahụ ka m ghọtawara ihe ụwa na-akọ. Ọ bịara doo m anya na ihe ga-enyere mmadụ aka ịna-amụta ihe bụ ihe ịgbanwere onye ahụ. Ọ bụ mgbe ahụ ka m chọpụtara na m nwere ike imete ndị ọzọ mụ na ha ka nọ enyi.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 27:10.
Onye na-eche naanị gbasara otú ihe dịbuuru ya yiri onye na-anya ụgbọala nke anya ya dị naanị n’enyo na-egosi ya ihe ndị dị n’azụ
Na-emere ndị ọzọ ihe. Baịbụl kwuru, sị: “Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.” (Ndị Filipaị 2:4) Otu ihe ga-enyere gị aka ma ihe gbanweere gị bụ inyere ndị ọzọ aka. Otu nwa agbọghọ dị́ afọ iri na asaa aha ya bụ Njideka kwuru, sị: “Ka m na-eto, m chọpụtara na obi na-adị m ụtọ ma m nyere onye ọ dị ka ọ dị m aka, ma ọ bụkwanụ onye ọnọdụ ya ka nke m njọ.”
“Asịla: ‘Gịnị mere oge gara aga ji dị mma karịa oge a?’”—Ekliziastis 7:10.
“Iji anya hụ ihe dị mma karịa ịwagharị n’agụụ na-agụ mkpụrụ obi.”—Ekliziastis 6:9.
“Onye agbata obi nke nọ nso dị mma karịa nwanne nke nọ n’ebe dị anya.”—Ilu 27:10.
“Ndị na-eto eto ga-edili ihe gbanweere ha ma ha ghọta na ihe ga-agbanwerịrị mmadụ ná ndụ. Ịghọta ya otú a na ịnabata ya ga-enyere ha aka. Ọ ga-emekwa ka ha na-eme nke ọma.”
“M merihaala otu ihe nyere m nsogbu, anaghị m anọ na-eche gbasara ya. M na-elekwasịzi nsogbu ọzọ anya. Otu ihe m ghọtara na-eme ka mmadụ die ọnọdụ gbanweere ya bụ onye ahụ ilekwasị anya n’ihu, ọ bụghị n’azụ.”